Burma Strange News (Burmese Version): မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်ခေတ် လူနေမှုစနစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်ခေတ် လူနေမှုစနစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက ထွန်းကားခဲ့သည့် ကျောက်ခေတ် ဂူနေ လူနေမှု စနစ်တရပ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယနေ့တိုင် ထွန်းကားလျက် ရှိနေကြောင်း သုတေသီများ ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း တသောင်းသုံးထောင်ခန့်က ထွန်းကားခဲ့သည့် ပြဒါးလင်းဂူ အတွင်း မှီတင်း နေထိုင်ခဲ့သည့် ကျောက်ခေတ် လူသားများ အကြောင်းကို လူသိများကြသည်။
ထို့နောက်၊ ကြေးခေတ်၊ သံခေတ်၊ မြေရှင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်၊ ကိုလိုနီခေတ်၊ လွတ်လပ်ပြီးခေတ် စသည်ဖြင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ ကျောက်ခေတ် ယဉ်ကျေးမှုများ ကွယ်ပျောက်သွားပြီဟု လူအများက ယူဆနေကြသည်။
မကြာသေးမီက လေ့လာချက်များအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်ခေတ် ဂူနေလူသား အချို့ ရှိသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ဂူနေလူသားများသည် ဥာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးပုံ မရကြောင်း သုတေသီများက ဆိုသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်တသောင်းကျော်က ပြဒါးလင်းဂူတွင် နေထိုင်သည့် ဂူနေလူသားများသည် ဂူနံရံတွင် ပန်းချီရေးဆွဲတတ်သော်လည်း ယခုခေတ် မြန်မာ့ ဂူနေလူသားများသည် လက်ညှိုးညွှန်ခြင်းကိုသာ လုပ်တတ်ပြီး လိုအပ်သည်များကို မှာစားတတ်ကြောင်း သုတေသီများက ရှင်းပြသည်။ ခေတ်သစ် ဂူနေလူသားများသည် စကားမပြော တတ်သေးကြောင်း၊ လက်ဟန် ခြေဟန်ဖြင့်သာ ညွန်ပြကြပြီး၊ အသံထွက်သည်ကို မတွေ့ရကြောင်း မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား သတင်း ကြည့်ရှုသူ တဦးက ပြောသည်။
ပြဒါးလင်းဂူမှ ရှေးဦးလူသားများသည် ကျောက်လက်နက်များကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်လုပ်တတ်သော်လည်း ခေတ်သစ် ဂူနေလူများမှာ ကိုယ်တိုင် မလုပ်တတ်ကြောင်း၊ သို့သော် ဈေးကြီးပေးကာ ၀ယ်ယူ တတ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင် မလုပ်တတ်သော်လည်း လက်နက် အလုပ်ရုံများကို သူတပါး အကူအညီဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားမှုများတော့ ရှိကြောင်း သုတေသီများက ဆိုသည်။ မြန်မာ့ ခေတ်သစ် ဂူနေ လူများသည် တိုင်းပြည်၏ သယံဇာတများကို လူလိမ်လူကောက်များနှင့် ဆက်သွယ်ကာ ကြွပ်ကြွပ်အိပ်များနှင့် လဲလှယ်လေ့ ရှိကြောင်းကိုလည်း စီးပွားရေး ပညာရှင်များက သုံးသပ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျောက်ခေတ် ယဉ်ကျေးမှု မကွယ်ပျောက်သေးသည်မှာ သေချာကြောင်း၊ ယနေ့တိုင် အသုံးပြုလျက် ရှိသေးသည့် ငရုတ်ကျည်ပွေ့၊ ငရုတ်ဆုံ နှင့် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ်များက သက်သေပြနေကြောင်း ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင်များက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
လေ့လာလိုသူများ အတွက် အညွှန်း
Posted by BS News at 4:13 AM
GOOD! HAHA, CARRY ON!!
ဟုတ်ပ....ဟုတ်ပ....ဟုတ်ပ.... စကားမပြောတတ်တဲ့ ထမီဝတ်အာ ဏာရှုးတွေ.... ထွီ.......
ကောင်းလိုက်တဲ့ရိုက်ချက် ဟတ်ထိတယ်ဗျာ ဆက်လုပ်အားပေးနေတယ်